Bepanthen Nappy Rash ude Ude 100G | Nzipu ahia otu ubochi - Lewisham Bepanthen Nappy Rash Cream Ude 100G- Ordrs
Bepanthen Nappy Rash Cream Ude 100G
Nappy Care Ude
Gụnyere pro vitamin B5
Na-eme ka akpụkpọ akpụkpọ anụ dị nro, dị mma na moisturised
Adabara maka ojiji na bụla nappy mgbanwe
Bepanthen® Nappy Care Oint na-arụ ọrụ n'ụzọ abụọ iji chebe onwe gị pụọ na ihe kpatara ọnya nappy na lekọta anụ ahụ nwa gị adịghị mma.
Bepanthen® na-arụ ọrụ site na ịme akwa, ikuku na-eku ume, na-enyere aka kpuchido ọbụlagodi akpụkpọ anụ kachasị njọ site na mgbakasị na ịhịa aka.
Bepanthen® dị nwayọ nwayọ, enwere ike iji ya na ngbanwe ọ bụla iji nyere aka na-emetụta akpụkpọ anụ, gụnyere nke ụmụaka akaghi aka.
Bepanthen® nwere Provitamin B5 nke ji nwayọ na-enyere anụ ahụ dị nro aka ịrụzi ihe mgbochi nchebe ya mgbe ọ na-eme ka ọ dị nro, dị mma ma dịkwa mma. Mmiri a na-emepụta mmanụ na mmiri na-eme ka mmiri dị n'ime anụ ahụ na-enye ọnọdụ kachasị mma iji kwe ka mgbake akpụkpọ ahụ dị nro na-enweghị ihichapụ akpụkpọ nwa gị, na-eme ka ọ dị mma ma dị mma.
Ọzọkwa dị na 30g na 50g nha.
Jiri nlezianya na nlekọta kwa ụbọchị site na ihe kpatara ọnya nappy
Na provitamin B5
O nweghi agba, isi, ihe nchekwa ma ọ bụ ọgwụ antiseptics
Ngwugwu ngwugwu: 100g